MA SUURTOGAL IN LA QUUDIYO BAKAYLAHA LEH KIBIS: FAA'IIDOOYINKA IYO DHIBAATADA, SIDA LOO BIXIYO - XOOLAHA
Ma suurtagal in la siiyo rootiga bakaylaha ama qashinka
Bakeyle caafimaad leh ayaa leh cunto cunid aad u wanaagsan - hal fadhiiba wuxuu cuni karaa badhkii bacda cuntada. Laakiin xayawaanka ma ahan mid ciriiri ah, sababtoo ah waxay leedahay mareenka mindhicirka oo xasaasi ah. Meel ka mid ah liiska bakteeriyada waxaa lagu qabtaa rooti, ​​miyay suurtagal tahay in la dhajiyo, qaab noocee ah iyo qiyaas ahaanba - tan waxaa lagu sharxay dheeraad ah.
Ha bakayle cunaan rooti
Cuntada bakteeriyada badani waxay aaminsan yihiin in alaabada roodhida ay tahay mid aan loo baahneyn xayawaankooda, sababtoo ah maaddooyinka nafaqada ku jira, waxay kor u qaadaan dhadhanka hilibka iyo tayada ganacsiga ee dhogorta.
Si kastaba ha noqotee, dhakhaatiirtu waxay sheeganayaan in dhammaan noocyada cuntooyinka noocaas ah ay faa'iido u leeyihiin. Gaar ahaan, mamnuucistu waxay khusaysaa dhamaan noocyada kala duwan ee bakaylaha. Xitaa qadar yar oo roodhida ah ayaa burburin kara qaybaha dwarfka.
Waa muhiim! Wax kasta oo bur ah oo loogu talagalay bakaylaha dhirta madaxbannaan waa suntan tartiib tartiib ah. Tani waxay sidoo kale khuseysaa macmacaanka, buskudka iyo macmacaanka kale. Wixii xayawaan carafeed ah, xitaa sheyga shukulaatada ah wuxuu noqon karaa mid dilaa.
Noocyada hilibka, roodhadu waa kaydka karbohidraatka, taas oo ku jirta cuntada kooxdan xayawaanka ah waa inay ahaataa ugu yaraan 80%. Cilmi baadhayaashu waxay xusuusnaadaan in badeecadani aysan ahayn "kaloori madhan" sababtoo ah waxaa ka mid ah:
borotiinka qiimaha leh;
Marka la isku daro, qaybahaasi waxay saameyn ku yeeshaan hawlaha qalabka wadnaha, difaaca jidhka, xubnaha jirka ee dheef-shiidka, dheef-shiid kiimikaad, tayada timaha iyo horumarinta unugyada muruqyada. Waa caan ku ah in asiidhyada waxtarka leh lagu kaydiyo xataa xitaa xarumaha cuntada.
Soo ogow in ay suurtagal tahay in la siiyo rootiga digaagista.
Si kastaba ha noqotee, habka lagu nadiifiyo rootiga ayaa lumisa qadar fara badan oo fitamiino iyo macdan, sidaas darteed ma noqon karto saldhigga cuntooyinka bakayle. Intaa waxaa dheer, sida laga soo xigtay khabiirada, alaabta noocan oo kale ah waxay khatar ku yihiin caafimaadka ee xayawaanka rabaayada ah.
Video: Miyuu suurtogal yahay in lagu quudiyo rootiga bakaylaha?
Jirooyinka suurtagalka ah:
Nadiifinta aan habooneyn ee qaboojiyeyaasha (bakaylaha cuntooyinka kalooriyada ah ee aan wanaagsaneyn ayaa si xun u cuna, oo marka laga reebo, ma jiraan wax kiciya oo ah silicon dioxide);
daciifinta unugyada daanka, oo kobcaya asalka astaamaha hypovitaminosis;
dhacdada qaladka ee ilkaha (nidaamka aan habbooneyn ee ilkaha), taasoo ka hortagaysa hawlgalka buuxa ee qalabka daanka;
Dhibaatooyinka dheef-shiidka (cillad-xumadu waxay ka timaaddaa xaqiiqda ah in mareenka caloosha ee xayawaanka ee loo qaabeeyey si loo barbardhigo quudinta qudaarta aan sida la cunin)
khatarta xanuunka 'enteritis' (hababka caabuqa ee xubnaha jirka ee dheef-shiidka ayaa sabab u ah microflora oo daciif ah);
Buurnaanta (immobility-ka bakeylka waa mid leh maqaarka iyo cudurrada faafa).
Ma taqaanaa? Khamriga cagaaran 120 jeer daqiiqad gudaheeda waxayna leeyihiin in ka badan 17 kun oo buro dhadhan.
Xeerarka aasaasiga ah ee lagu daro rootiga cuntada
Cunto khibrad leh waxay ku quudiyaan xayawaanka roodhida, roodhida iyo rootiga cagaaran, badiyaa waa isku daraan. Si kastaba ha noqotee, walxadan waa in lagu soo bandhigo cuntooyinka xayawaanka si taxadar leh, ka dib talooyinka dhakhaatiirta xoolaha.
Laga soo bilaabo da'dee ayuu karaa
Qadar yar, quudinta noocaas ah waxay faa'iido u leedahay bakteeriyada yaryar. Si kastaba ha ahaatee, waa suurtagal in la siiyo dadka cusub ee dhashay illaa hal bil oo da 'ah. Haddii kale, xayawaanka waxaa laga yaabaa inay qabaan xanuunka caloosha, shuban, shuban, matag, taas oo noqon karta dhimasho.
Cunto khibrad leh ayaa kugula talinaysa soo bandhigida roodhida cuntada ee liiska 30-40 maalmood ee bakaylaha jirkaaga ka dib markii ay ka soo jeeda hooyada. Cuntada hore waa in lagu qooyay caanaha diirran ama biyaha. Caanaha hooyada ka dib, rootiga, sida cunnooyinka kale ee cusub, waa in si taxadar leh loo soo bandhigo, qadar yar.
Baro naftaada shubanka taraqda guriga.
Waxaad u baahan tahay inaad bilowdo qaybaha ugu yar, si tartiib tartiib ah u kordhin 10 maalmood oo kasta. Waxaa ugu wanaagsan in alaabta lagu daro mashiinka qoyan. Qodobbada ugu wanaagsan ee loogu talagalay waa qashinka cuntada sida foomka dalagga iyo maraqa. Tixgeli in aan ka badnayn 200 g oo ah cuntada sida loogu talagalay loogu talagalay maalin kasta.
Rooti cusub ayaa si adag loo mamnuucay quudinta bakaylaha; Khabiiradu waxay kugula talinayaan inay ku siiyaan foomka la qalajiyey. Si arrintan loo sameeyo, jajabka ugu gooyo qaybo mitir ah, oo si siman u faafaya xaashida dubista oo u eg sun qorraxda qallajinta dabiiciga ah. Marka ay dhoobo kulul adag tahay, waxay ku urursan yihiin bacaha wax lagu duubo. Goobta qallalan ha ahaato, haddii kale waxaa laga yaabaa in lagu daboolo midab. Milkiilayaal badan ayaa horey u soo ururiyay rooti leh tiro toon ah oo ah toon. Kordhintaasi waa kicin dheeraad ah oo loogu talagalay nidaamka difaaca jirka ee xayawaanka, iyo sidoo kale ilo vitamin.
Wixii kuwa jilciya ee xayawaanka raba xayawaanka leh, waxaa muhiim ah in la tixgeliyo sifooyinka nadiifinta ee sheygan. In lagu cabo koobab xayawaan ah, had iyo jeer waa in ay noqdaan biyo cusub oo cabitaan ah, sababtoo ah nooca cuntadu waa sababta harraad. Sidaa darteed, waxaa lagula talinayaa in lagu qooyo bacda diyaargarowga ka hor inta aadan quudin biyo.
Waa muhiim! Iyada oo aan jirin duruufaha waa in laga tagaa xaleef ah kibis aan la cunin ee feeder bakayle. Tani waxay sabab u tahay inay u janjeedhaan si deg deg ah oo ay uga sii darayaan iyo qaab-dhismeedkooda. Waxyaabaha ay waxyeelo u geystaan ​​xoolaha si adag ayaa loo mamnuucay.
Sida laga soo xigtay dhakhaatiirta xoolaha, maaddadani waxay ka muuqan kartaa qaybta kalkaaliyayaasha caafimaadka oo kaliya sida daaweyn. Qiyaasta maalinlaha ah waxaa loo xisaabiyaa sida 10 rodol oo rooti ah oo ku dhicid kiilo kasta oo ah miisaanka nool ee xayawaanka. Xusuusnow in tani aysan ahayn qaybta ugu muhiimsan ee xayawaanka xoolaha.
Ma suurtogal ah in lagu quudiyo bakaylaha
Marka hore, khubarada waxay kugula talinayaan beeraha bakaylaha inay ka tagaan noocyo of rooti ah oo ay ku jiraan xaddi badan oo gluten ah. Laakiin marka laga reebo tan, waxaad u baahan tahay inaad ogaatid roodhi soo-saarka ah ee faa'iido u lahaan kara xayawaanka rabaayada ah, kuwaas oo waxyeello leh.
Delicacy ee qaabka la qalajiyey ee roodhida cad waa mid aad u faa'iido leh ee bakaylaha. Noocyada kala duwan ee cuntadooda waxay siin doonaan jirka xayawaanka leh carbohydrates, borotiinka, dufanka, fiitamiinada iyo macdanta. Si kastaba ha ahaatee, ha ilaawin waxyaabaha ku jira kalooriga ee sheyga iyo cawaaqibyada halista ah ee ay ka badan tahay.
Kufsashada xaleefyada rootiyada, khatarta weyn ee ka timaadda si ay u hesho miisaan dheeraad ah ama jiran. Ha ku dhufanin cuntadaas. Ka dib oo dhan, khadka u dhexeeya faa'iidooyinka iyo dhibaatada waa mid aad u yar.
Ogow cawska aan la siin karin bakaylaha, iyo sidoo kale waxa biyaha si ay u cabbaan bakaylaha.
Dhiirrigelinta yar ee saaxiibtinimo leh ee ku jirta qaab khudradda madow madow ma dhibayso isaga. Taas bedelkeeda, wuxuu jidhkiisa ku kobcin doonaa kiimikada nicotinic iyo pantothenic, thiamine, riboflavin, niacin, kolka, pyridoxine.
Laakiin xaddiga xad-dhaafka ah ee raaxeysiga ayaa ka xanaajin kara hargabka, caloosha iyo xannibaadda mindhicirka. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in la xaddido qaybaha noocaas ah ee quudinta noocan ah. Waxyaabaha noocaas ah, xitaa qiyaasaha yar yar, ayaa ka hortagaya bakaylaha dhicida.
Haddii aan ka hadleyno iibsashada iyadoo ay weheliso qashinka kiimikada, dhirta, dhadhanka iyo dhadhanka, ka dib, dabcan, bakeyleyda xasaasiga ah, cuntadani waxay khatar u tahay xitaa tiro yar. Hase yeeshee, qashinka guri-guri ee, liddi ku ah, waxay u adeegi doontaa sida fitamiin-macdanta, taas oo kaliya ma xoojinayso nidaamka difaaca, laakiin waxay sidoo kale hagaajinaysaa shaqeynta hababka wadnaha iyo neerfayaasha. Laakiin in cuntada ee bakaylaha sida feed waa in ay u muuqdaan wax ka badan hal jeer toddobaadkii in tiro xadidan.
Ma taqaanaa? Australiya, taranka taranta ayaa mamnuucaya sharciga, xadgudubka taas oo lagu ganaaxay ganaax 30 kun oo doolar. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in dadka maxalliga ah ay tixgeliyaan xayawaanka duurjoogta ah sida cayayaanka ugu waxyeelleysan. Sannad kasta, waxay burburiyaan dalagyada beeraha iyo hawlahooda degdegga ah waxay keenayaan hoos u dhac ku yimi dalalkii oo dhan, taas oo keenaysa waxyeello dadweynaha ka badan $ 600 milyan.
Kukiyada guriga lagu karsado
Laga soo bilaabo roodhida guriga, bakaylaha waxaa mararka qaarkood laguugu soo bandhigayaa daawooyinka qaabka loo yaqaan 'cookies oatmeal'. Waxaa ku jira carbohydrates faa'iido leh, dufan, fiitamiin iyo macdan. Laakiin isla waqtigaas, isticmaalka xad-dhaafka ah ee noocan oo kale ah ayaa waxay halis gelineysaa ku-xadgudubka kalsoonida ee microflora xiidmaha, taas oo la xiriirta sonkorta iyo walxaha dareeraha ee ku jira tiro badan oo halkaas ah.
Kadeecada lo'da ayaa ka hortageysa bakaylaha, sida noocyada kale ee nacnaca. Cunto noocan oo kale ah ayaa si deg deg ah u keenta calool-xanuun, caloosha, is-goysyada iyo waxay keeni kartaa xakameynta mindhicirka yar ee xayawaanka. Waxaa intaa dheer, xaddi badan oo dufan, sonkor, istaarijiyo, midabyo, dhadhan iyo dhadhanka ayaa si xun u saameeya caafimaadka ee xayawaanka geedaha.
Haddii aad go'aansato inaad daaweyso saaxiibkaaga qalafsan ee roodhida, waxaad u baahan tahay inaad doorato kali cusub. Haddii wax calaamado ah oo caaryar ah laga helo, alaabta waa in la tuuraa.
Waxay ku jiri doontaa dhimasho mareenka maqaarkiisa, kaas oo u muuqda inuu ku urursan yahay jirka. Saameynta cad waxay noqoneysaa mid muuqata marka geedi socodka aan dib-u-dhicin ay ka bilaabanayso qaybta qaybta qaybta.
Waxay noqon doontaa mid waxtar leh si aad u ogaato in ay suurtogal tahay in la bixiyo maro, bran, guntin iyo gooryaan si ay bakaylaha, iyo sidoo kale cawska si ay u quudiyaan bakaylaha.
Khamriga ku sumo leh rootiga dabiiciga ah waxaa lagu muujiyaa calaamadaha soo socda:
xanuunada mareenka mindhicirka;
diidmada in la cuno;
muqosurus ee saxarada;
curyaankii lugaha lugaha;
Sidaa darteed, rootiga ma noqon karto saldhigga cuntada ee bakaylaha. Ka dib oo dhan, waxaan ka hadlaynaa dhirta yaryar ee u baahan cagaaran, casiir leh iyo quudin. Xilliga marmarka qaarkood waa la oggol yahay in lagu daaweeyo xayawaanka la xayawaanka leh rooti qallalan oo qalalan. Ha ilaawin in isaga loogu talagalay waa cunto culus, faa'iidooyinka kuwaas oo laga yaabo in aysan suurtagal ahayn waxyeellada suurtagalka ah.
Dabcan waad awoodi kartaa. Waxaad ku quudin kartaa rootiga cad iyo madow ee bakaylaha, laakiin ka hor inta aanad quudin karin bakaylaha waa lagama maarmaan in la qalajiyo wax yar. Wixii bakaylaha, waxaad sidoo kale ka iibsan kartaa crackers dukaanka, sida daaweynta bakaylaha sida abaalmarinta waa mid aad u faa'iido leh. Crackers weli waxaa lagu qoyn karaa caanaha.
Waxaan ku siinayaa rootiga adag iyo qashinka marka ay joogaan, waxay u egtahay qashinka, waxaan u maleynayaa inaadan wax badan siin shaqaalaha iyo haweenka.